Maxaan dib ugu magacdarnay oo ugu badalnay Domainkeena Martech.zone | Martech Zone
Axad, Janaayo 29, 2017 Khamiis, May 7, 2020 Douglas Karr
Ereyga blog waa mid xiiso leh. Sanado kahor, markaan qoray Blogging Corporate for Dummies, Waan jeclaaday ereyga blog maxaa yeelay waxay muujisay dareen shaqsiyad iyo hufnaan. Shirkaduhu mar dambe kuma filnayn inay gebi ahaanba ku tiirsanaadaan dejinta warka si ay u muujiyaan dhaqankooda, wararkooda, ama horumarkooda. Waxay ku sii deyn karaan kuwaas iyaga oo adeegsanaya bartooda shirkadeed waxayna dhisi karaan bulshada iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada oo ka dhawaajisay astaantooda. Waqti ka dib, waxay dhisi karaan dhagaystayaasha, bulshada, iyo u doodista.
Shirkadaha ayaa awooday inay wadaagaan macluumaadkan wixii ka baxsan guryahooda (warbaahintu leedahay), in kastoo. Waxay sidoo kale leeyihiin fursado aan caadi aheyn oo codkooda looga maqlo daabacadaha kale (kasbadeen warbaahinta). Labaduba, dabcan, waxay leeyihiin suurtagalnimada in la wadaago (warbaahinta bulshada) ama lacag la siiyay lana dalacsiiyay (warbaahinta lacag la siiyay). Ereyga Blogging Corporate ayaa xaddidayay, iyo muddada Content Suuq ayaa hoggaanka u qabtay shantii sano ee la soo dhaafay daboolida istiraatiijiyadda ay shirkadaha ku soo bandhigeen warbaahinta ay leeyihiin, warbaahinta ay kasbadeen, warbaahinta bulshada, iyo ilaha warbaahineed ee lacagta laga bixiyo. Arrinta xiisaha lihi, waxay qortay isla buugga saxda ah laakiin waxay ugu magac dartay Suuqgeynta Macluumaadka Dummies… waxay istaagi lahayd imtixaanka waqtiga. Laakiin ereyga blog xaddiday noloshiisa.
Magaca bartayada waxaa loo yaqaanay Martech Zone la URL marketingtechblog.com. Waxaan ku sameynayay wax la mid ah barta aan ku sameeyay buuggayga. Ereyga blog kiciyey jawaabo la mid ah. Ereyga blog laga dhawaajiyay oo da 'ah, shaqsiyan ah, oo aan ahayn xirfadle. Waxaan si joogto ah ugu gudbiyay goobta a daabacaadan. Qaar kale waxay tixraacaan baloogyadooda sida joornaalada dhijitaalka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka baqay isbedel domain sababtoo ah dhammaan mashiinka mashiinka raadinta ee aan ku dhex dhisay bartaas, sidaa darteed weligey kuma dhicin inaan cusbooneysiiyo. Ilaa dhowaan, markii Google uu joojiyay ciqaabida jihooyinka iyo xitaa lagu daro a habka isbedelka domain ee konsol raadinta.
Sidoo kale way nagu adkaatay inaan wadaagno cinwaankeenna. Waxaan had iyo jeer ku dhihi jirnay suuq-teknolojiyad-blog-dot-com oo dadka u higaadin marka aan ka hadlayno. Ma ahayn degel si fudud carrabka uga rogay oo ay fududahay in loo turjumo URL uu qofku xusuusto oo uu ku qoro biraawsar. Martech wuxuu noqday ereyga la aqbalay warshadaha ee iibka iyo suuq geynta tikniyoolajiyadda iyo xalka.
Waxaan inbadan iyo in kabadan ka raadiyay aagag laxiriira shuhadada oo laga yaabo in laheli karo kuwaas oo sahlanaa in laxasuusto… aakhirkiina kudhacay Martech.zone (waxaan sidoo kale leenahay suuq geyn. teknoolojiyadda laakiin taasi way dheertahay).
Soo Bandhigida Martech Zone
Waxaan ka caawinnay dhowr shirkadood inay u haajiraan degmooyin cusub oo aan daawanay qiimeyntooda ugu dambeyn caadi iyo soo noqosho. Waxay ahayd waqtigii aan sameyn lahayn si lamid ah sidaa darteed waxaan jiiday fiilada - toban sano kadib - Jimcaha. Waxay badiyaa ahayd socdaal sahlan oo dhawr waxyaalood badbaadi:
Waxaad layaabi laheyd inta jeer ee aad isticmaasho magaca domain ee astaamaha iyo goobaha saddexaad! Waxaan u maleynayaa inaan ku isticmaalay tobanaan kun oo saxiixyada goobta iyo diiwaangelinta ah. Tani waxay ahayd il furitaan dhab ah!
Xiriiriyadeenii hore iyo domain-ka ayaa ka dambeeyay an Shahaadada SSL. Natiijo ahaan, kuma aanan awoodi karno inaan si fudud u tuurin magacyadeenna bartayada oo aan dadka u weecino. Waxay ahayd inaanu martigalino goob labaad oo leh cinwaankeenii hore, rakibno shahaado, oo aan dib u habeyn joogto ah ugu sameyno domainka cusub. Waxaan sidoo kale u baahan karnaa inaan sidan ku sameyno sawirro maadaama aan haysanno URL-yo tixraac ah oo loo soo diray emaylka iyo barnaamijyada moobiilka. Weli waan fiirsanayaa saameynta.
Waxaan waynay dhamaanteen tirinta xiriirinta bulshada. Aad ugama walwalayo tan, waana joojinay shaacinta tirinta saamiga. Waxaan la yaabanahay in midkoodna barnaamijyada gaagaaban iyo barnaamijyada bulshada aysan raacin isku xirnaanta sida makiinadaha raadinta ay sameeyaan. Waxay umuuqataa sida soo socota URL-yada inay noqon laheyd wax fiican in la nadiifiyo xogtooda.
Markaa halkaas waad haysataa! Waxaan hada isku toosinaynaa dhamaan guryahayaga iyo baraha bulshada si loogu daro sumada cusub… anaga Daabacaadda Martech, our Martech Zone Wareysiyada Podcast, iyo kanaalada Martech ee bulshada (arag sida aan nahay beddelay Twitter iyadoo aan lumin kuwa raacsan)!
Madaxweynaha oo sagootiyey Martech Zone iyo hello Martech Zone!
Tags: brandingekspertenbadalaya domainblogging shirkado loogu talagalay dummiesbeddelka domainBlog Tech Suuqblog tiknoolajiyadda suuqgeyntablogtechbloghalgankablog martechmartech zonewaaritaan rasmi ahSEO
Jan 29, 2017 saacadu markay ahayd 8:08 PM